အင်ဒပ်တာ - ဝီကီပီးဒီးယား
A selection of low-value inductors
မိုက်ကယ် ဖာရာဒေး (1831)
အင်ဒပ်တာကို အခြားအမည်ဖြင့် ကွိုင်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုပါသေးသည် ။ မြန်မာအမည်ဖြင့် လျှပ်စစ်ကိုညှို့နိုင်သောကြောင့် လျှပ်ညှို့ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြပါသေးတယ် ။
Inductor ဆိုသည်မှာ ကြေးဝါယာကြိုးခွေကို တထပ်သို့မဟုတ် တထပ် ထက်မက စနစ်တကျရစ်ခွေထားသော ဝါယာခွေတခုကို Inductor or Coil ဟုခေါ်ဆိုပါတယ် ထိုသို့ရစ်ခွေထားရာဝယ်တွင် အတွင်းတွင်တခုခု ထပ်ခံ၍ ရစ်ခွေထားနိုင်သကဲ့သို့ မည်သည့်သတ္တုမျှမပါဝင်ပဲ ဝါယာကြိုးချည်းသက်သက်ရစ်ခွေထားခြင်းမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
၁ . Current ကို Magnetic Field သံလိုက်စက်ကွင်းအသွင်ဖြင့် ယာယီသိုလှောင်ပေးခြင်း
၂ . ယင်းအတွင်းစီးဆင်းနေသော Current ကိုဆန့်ကျင့်ခြင်း
၃ . DC ကို ဖြတ်ခွင့်ပြုပြီး AC ကိုဆန့်ကျင်တားဆီးခြင်း ကိုပြုလုပ်ပါတယ်
Inductor တခု၏ လျှပ်စစ်သိုလှောနိုင်စွမ်းပမာဏကို Inductance ( L ) ဖြင့်ဖော်ပြပါတယ် Inductance ကို Henry ( H ) ဖြင့်တိုင်တာပြီး ယူနစ်များမှာ uH = Micro Henry , mH = Mili Henry တို့ဖြစ်ကြပါတယ် ကွိုင်တခု၏ Inductance တန်ဖိုးသည် ယင်း၏အပါတ်ရည်နှင့် အတွင်းခံပြုလုပ်ထားသော သတ္တုထည်ပေါ်မူတည်ပါသည် သိသာရန်မှတ်သားထားရမယ့် ၂ ချက်သာ ရှိပါတယ်
Air Core Inductor ၏ သင်္ကေတ
Data Sheet မှာ
၁ . No of Turn ကွိုင်၏ အပါတ်ရည်
၂ . Type of Core သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ် Core ဆိုသည်မှာအတွင်းတွင်ခံ၍ရစ်ပါတ်ထားသော ပစ္စည်းကိုခေါ်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
Inductor များကို ၃ မျိုးထပ်ခွဲထားပါတယ်
၁ . Air Core
၂. Iron Core
၃. Ferrite Core တို့ဖြစ်ပြီး ပုံထဲတွင်လေ့လာနိုင်မှာပါ
၁. Air Core
Air Core ဆိုသည့်အတိုင်း ကွိုင်အတွင်းတွင် မည်သည့်အရာမှမပါပဲ လေသာလျှင်ပါဝင်သောကြောင့် Air Core ဟုခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကြေးကြိုးများသက်သက်သာခွေထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ထို့ကြောင့် အလေးချိန်အပေါ့ပါးခြင်း Magnetic Field အားနည်းခြင်း Low Frequency လည်းအားနည်းပြီး Inductance လည်းနည်းနည်းသာသရရှိနိုင်ပါတယ် ရေဒီယိုလိုပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်ပါတယ် သင်္ကေတအားဖြင့် သာမန်အတွန့်လေးသာပါဝင်ပါတယ် ။
Iron Core ဆိုသည်မှာအတွင်တွင် သံပြားများကိုထည့်သွင်း၍အပြင်မှ ကြေးကြိုးများကိုရစ်ခွေထားခြင်းဖြစ်သည် Audio Frequency အတွတ် nickel alloy နှင့် Silicon Steel တို့ကိုအသုံးပြု၍ ကတ်ဆက္များ အသံချဲ့စက္များ TV များစသည့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် Audio ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အလွန်အသုံးများသည် ယင်းတွင် အတွင်းတွင် သံကိုခွေ၍ပြုလုပ်ထားပြီး Inductor ၃ မျိုးလုံးတွင် အရွယ်အစားအကြီးမားဆုံးနှင့် အလေးလံဆုံးဖြစ်သည် Low Frequency သာရနိုင်၍ Inductance အလယ်အလတ်အဆင့်သာရှိပြီး အိမ်သုံးရိုးရိုး Choke များတွင်တွေ့ရမှာပါ သင်္ကေတအားဖြင့် အတွန့်လေးပေါ်တွင့် မျဉ်းဖြောင့်နှစ်ကြောင်းဆွဲထားခြင်းကိုမြင်ရမှာပါ ။
၃. Ferrite Core
Ferrite Core ဆိုသည်မှာ Nickel oxide နှင့် Ferric Oxide နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် အလွယ်ပြောရလျှင် သံကိုစွမ်းအားမြှင့်ပြုပြင်ထားခြင်းပြီး ပေ့ါပါးကျစ်လျစ်လာစေခြင်းပါ ထူးခြားချက်မှာ အလးချိန်အနည်းငယ်နှင့် အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ပေမယ် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကအလွန်ကြီးမားပါတယ် High Frequency ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး Inductance လည်းများပြားပါဝင်ပါတယ် အဝေးသို့ထုတ်လွှတ်နိုင်သော Radio စက်များ TV စက်များ သည်တို့တွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုထားပါတယ် အိမ်သုံး Auto Choke တွင်လည်းပါဝင်သည် သင်္ကေတမှာ အတွန့်လေးပေါ်တွင် သံမဟုတ်ပဲ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် မျဉ်းစက်လေး ၂ ကြောင်းဖြင့်ဖော်ပြထားပါတယ် ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်ဒပ်တာ&oldid=702736" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။